Animated Screensaver Maker 3.1 Full Crack ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Softwares » Animated Screensaver Maker 3.1 Full Crack
By နေမင်းမောင်3:52 AM9 comments
ဒီကောင်လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုလိုတဲ့ Background တွေ animation လေးတွေနဲ့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ screensavers လေးတွေကို မိမိတို့ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ဖန်တီးယူ နိုင်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ အထဲမှာ Full Version လေးအသုံးပြုနိုင်အောင် Crack ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 11.1 MB ရှိပါတယ်။အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ.။
မျိုး August 18, 2012 at 7:25 PM
Anonymous August 19, 2012 at 4:25 AM
full version i can't do .please help me brother ! Thank to you.
အကိုရေ keygen ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကဖွင့် လို့ မရဖြစ်နေတယ် antivirus ကိုပိတ်ပြီးဖွင့် တော့ လည်းမရဖြစ်နေတယ် full version မဖြစ်တော့ water mark ကြီးပါနေတယ် အကိုရ တချက်လောက် keygen ပဲရရ crack file ပဲရရ လုပ်ပေးပါအုံး ..ကျေးဇူးပြုလျှက်..........ချစ်မုန်း....
နောက်လည်း post တွေအများကြီးတင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်
full version bal lo lote ya mar lae ma ya loe. par
keygen ka code ko u pee register thae: thae' tar your code ka na ku pyit nay tal out ka ta ku mar bae paste loe. ya loe. thae' tar pee tot apply code nate tal ma pyit buu full version :( lote pay: bar ownn ko nay minn maung yae